राजासँग सेल्फी र ग्रुप फोटो : गणतन्त्रको उपलब्धि? – MySansar
राजासँग सेल्फी र ग्रुप फोटो : गणतन्त्रको उपलब्धि?
Posted on November 25, 2018 by Salokya
सक्रिय राजतन्त्रको बेला कल्पनाभन्दा पनि परको कुरा। त्यतिबेला राजालाई हेर्न लाम लाग्नु पर्थ्यो। राजा आउँथे टकटक अनि भन्थे, मैले बुझेँ।
अहिले भने उतिबेलाका प्रजाहरु पूर्व भइसकेका राजासित सेल्फी खिच्न सक्छन्। रेस्टुरेन्टमा भेटिँदा एउटा फोटो खिचौँ न भनेर ग्रुप फोटो खिच्न पाउँछन्। शायद् यसैलाई गणतन्त्रको उपलब्धि मान्ने होला। जनताको छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुँदा पनि आलोचना चर्किएकै छ।
अर्को एउटा पनि फरक देखिएको छ। राजतन्त्र कालमा राजपरिवारका पार्टीहरु गफमा मात्र सुनिन्थे। अहिले भने उनीहरु सार्वजनिक रुपमा रेस्टुरेन्टमा जान्छन्, खान्छन्, नाच्छन्। अनि उनीहरुका फोटो पनि सार्वजनिक रुपमा हेर्न पाइन्छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वरानी कोमल आफ्ना छोरा पूर्व युवराज पारससहित राजपरिवारका अन्य सदस्यहरु शुक्रबार त्रिसरा रेस्टुरेन्टमा पुगेका थिए। तर पूर्व युवराज्ञी हिमानी भने पार्टीमा देखिइनन्। बाउछोराको भने राम्रै मिलाप भएको फोटोमा देखिन्छ।
पार्टीका क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले डान्ससमेत गरेका थिए। त्यस्तै रेस्टुरेन्टमा भेटिएकाहरुसँग सामूहिक फोटोसमेत खिचेका थिए।
पार्टीमा केक चाहिँ यस्तो थियो।
शनिबार राति त्रिसराले पूर्व राजपरिवारका फोटोहरु सार्वजनिक गरेको छ। हेर्नुस् फोटोहरु
9 thoughts on “राजासँग सेल्फी र ग्रुप फोटो : गणतन्त्रको उपलब्धि?”
ज्ञानेन्द्र ले दाइ मारे होला तर अहिले को नेता ले हाम्रो आउने पुस्ता पनि मार्दै छ तर हामी हनुमान बनेर तेस्त नेता को पछि लागेको छोउ
बच्चाले काटेको केकमा रक्सि को बोत्तल, अचम्म!
दाइ मारा? मारेकै हो भने पनि राजा ले राजा लाइ मार्यो, तेस्को आफ्नै परिवार भित्र ले आफ्नै परिवार मार्यो, हामि गरिब जनतालाई के को टाउको दुखाइ ! बोरु हामि गरिब जनतालाई मार्ने, लुट्ने, देश बाट बिस्थापित गर्ने र आफु चै माहाराज को कुर्सि मा बसेर करोडौ अरबौ को मोज गर्ने दलाल डाका हरु लाइ सोत्तर पार्न हात चिलाएको छैन? यी माओबादी डाका हरु ले हामीलाई कस्तो सपना देखाएका थिए र आज उनीहरु कस्तो जिन्दगि मा रजाइ गरेर बसेका छन्? पख न, दिन त आउला नि, तिनका बाजेलाई गद्दाफी लाइ झैँ मुड्की मुड्कीले भकुरेर मार्नु पर्छ .
ए राजाले राजालाई ? उसो भा तिमी जस्ता रैती दास लाई अर्को रैतीले निचारेर मारे कुनै कानुन लाग्दैन ?
शाहकालमा कस्ता कस्ता भ्रष्टाचार र अपराध भए भन्ने बिचरा स्मरण शक्ति बिहीन अशिक्षित दास बबुरो लाई के थाहा।
यो नेताले एती खाए र ऊ नेताले एती खाए भन्न भन्दा किन जनता सामु गएर चुनाव जितेर देखाउदैनौं ए पाजी ? प्रजातन्त्र भनेको त्सैको लागी हो । राजतन्त्रमा तेस्तो गर्न पाईंदैन थ्यो । हुती नभएर कुनामा ईर्ष्या गर्दै रोएर किन बस्नु ?
Parash looks exactly like the infamous “Vlad the Impaler”
नेपालको टनकपुरको भुमि र नदि “अपने बापके” ठानेर बाँध बनायकोलाई अन्तारार्स्त्रिय कोर्टमा उभ्याउने भनेर भगाउने, “र” लाई नेपालको तराईलाई नेपाल बात अलग्याउने आदेशनै दिनेको षडयन्त्रको जवाफ “शान्ति छ्यत्र नेपाल” भनेर दिने,भुटान जस्तै बन्न नमानेकोमा नाकाबन्दी झेलेको,नेपालको तराई जत्ति बिहारीलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन पेस गरेको नक्कली नागरिकता विधेक रद्दीको तोकरिमा फाल्ने बिरेन्द्रको हत्या भयको थियो/ बिरेन्द्र मात्र संबैधानिक राजा नै भय पनि सदन र सरकारले गल्ति गरेमा अस्विकार गर्ने अधिकार थियो/ बिरेन्द्रको हत्या हुँदा दीपेन्द्रले नै हत्या गरेको प्रलाप गर्दै गरेको सरकार प्रमुख मात्रै होईन राजदरवारको सुरछ्याको जिम्मेवारी समेत बोकेकोले “बिरेन्द्रको हत्या यउटा ग्रायण्ड डिजाईन नै भयको र तेस्को विवरण पछि दिने” घोसना गरेको थियो/ उ आफै तेतिबेला सरकार प्रमुख थियो र जव उसलाई बिरेन्द्रको हत्या ग्रायण्ड डिजाईन नै भयको थाह थियो भने उसले तेस्को मतियारलाई समाउनु त् कता कता उल्टै यउटा ब्यापारी बन्न समेत योग्यता नभयको ज्ञानेन्द्र राजा बनाउन्दै बिरेन्द्र जिउन्दै छँदा गर्न नसकेको सबै गरेको थियो/
राजनज्यु, घटनाले स्पस्ट संकेत गर्छ बिरेन्द्र कसैको स्वार्थमा ठुलै बाधक बनेकोले ग्रायण्ड डिजाईन गरेरै हत्या गरियको संकेत गर्छ र यकातिर जनताले नपत्याउने ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनु र अर्को तिर ग्यानेंद्र्लेनै बिरेन्द्रको हत्या गरेको गरेको हल्ला गर्नु “बिरेन्द्रको बास्तविक हत्याराको अनुहार लुकाउने अर्को ग्रायण्ड डिजाइन” भयको नबुझ्ने सायदै कोहि होला, सिवाय तिनीहरुको ग्रायण्ड डिजाइन बनाउनेको प्रायोजित मोहराहरु बाहेक!!!/
यी पुर्ब राजनले राजगद्दीमा बसेका बेला जनता संग कैलेकंही यसरि हुलमिल गरेका भए सम्भवत श्रीपेच खुस्कदैन्थ्यो होला| मुलुकमा दुई चार जात बाहेक अरु पनि छन्, आदिवासी जनता पनि प्रजा हुन्, नागरिक हुन भन्ने हेक्का राखेको भए, अत्यधिक लोभी भएर अनि जानाजानी अनभीज्ञको नाटक खेल्दै “बुझें” मात्र नभनेको भए नारायणहिटीमै अहिले सम्म पनि राज हुन्थ्यो होला| चेतना भया|
संगीतकार प्रवीण गुरुङ्ग र ट्याक्सी चालक खड्गीका आत्माले शान्ति पाउन|
अर्को चुनावमा पुर्ब राजनले राजधानीबाट उम्मेदवारी दिनुभए हुन्छ|
राज पाठ जाँदा रक्त पात हुनु, पागल हुनु बा अरु धेरै दुर्घटना हुन् सक्थ्यो , तर सेफ ल्यनडिङ्ग गर्न सकेर देश मा हिजो का राजा र आजका प्रजाको को यो समागम निकै उत्कृस्ट लाग्यो |इतिहास र बर्तमान को यो भेट घाट आलंकारिक देखिए पनि यो यथार्थ हो | जिबन येसैमा चल्छ |
एउटै खाल्टोमा पुर्नु पर्ने दाइमाराको परीवार सबै एकैठाउँमा जम्मा भएको देख्दा हात चिलायो ।
यिनीहरु लाई त लाज भएन भएन, लाज हुनुपर्ने बाँकी जनता के गर्न गएको त्यहाँ ? अलिकति स्वाभिमान त हुनुपर्ने हो । के सोचेर लाम लाग्न गएको ?